Nri Anyasị Dị Ike Ma na Nchekwa Ladder
Ka m gosi gị ọkwa ọhụụ echekwara echekwara echekwara: Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ya, biko egbula ịkpọtụrụ anyị: info@abctoolsmfg.com
Ihe ndozi nke iwu doro anya na-abịa….
site ha na 21-04-17
You nwetụla ọnọdụ ndị a: Ekwesịrị ịkwatu ákwà ahụ ma saa ya, mana oche ahụ adịghị elu iru. Ihe ndị dị n'elu kabinet enweghị ike iru, ya mere m rịgoro na oche ọfịs. Ndị a bụ ihe ịtụnanya ga-apụta i ...
Dabere na data nke National Bureau of Statistics of China wepụtara taa, na mbido Eprel 2021, ma e jiri ya tụnyere mbubreyo Machị, ọnụ ahịa ahịa nke ụzọ 50 dị mkpa iji mepụta ihe na ngwaahịa 27 na mpaghara mgbasa mba ebilila. N'ime ha, ego nke ste ...
Otu esi belata onu ahia
Nchịkwa ọnụahịa nchekwa na-ezo aka na ụlọ ọrụ na njikwa nchekwa nke usoro nchekwa ọ bụla dị mkpa iji chịkwaa n'aka, ebumnuche nke ọnụ ala nchekwa kachasị iji nweta ogo nchekwa akọwapụtara na nchekwa nchekwa, gụnyere mbọ niile ịbelata ...
Isii na ọnọdụ na mmepe nke nkwakọba akụrụngwa ụlọ ọrụ
Mmepe nke ngwa oru nkwakọba akụrụngwa ụlọ ọrụ nwere isi ụzọ isii: nchịkọta ngwakọta zuru ezu, kwalite usoro ntinye usoro; Mwepụta omimi nke ihe nchekwa iji kwado mmepe nke e-azụmahịa; Ntọala nke ụlọ nkwakọba ihe ...
Walmart shelves robots na ọrụ
N'oge na-adịbeghị anya, Walmart tinyere robot shelf na ụfọdụ ụlọ ahịa California, nke na-enyocha shelf ọ bụla 90 sekọnd, pasent 50 karịa nke mmadụ. Adị robot. JPG robot mgbatị ahụ dị ụkwụ isii n'ogologo ma nwee ụlọ mgbasa ozi ejiri igwefoto tinye ya n'ọrụ. A na-eji igwefoto ahụ nyochaa ...
Akpa na mba! Shandong ọdụ ụgbọ mmiri na-etinye "anya amamihe" na ụgbọ mmiri
N'oge na-adịbeghị, shandong n'ọdụ ụgbọ mmiri Qingdao amamihe green n'ọdụ ụgbọ mmiri ewu kwukwara ọhụrụ pụta, onwe site shandong n'ọdụ ụgbọ mmiri Qingdao wheel barge ụlọ ọrụ, na-eduga nnyocha na mmepe nke "tug panoramic oyiyi mmepụta usoro" chie tinye n'ime mmepụta ojiji, n'ihi na sere mmiri n'ugwu “w ...
Port Qingdao nke Shandong Province: Model Light Shining 2021
site ha na 21-01-01
Oge na-aga, ọgụ na mgba na-aga n'ihu.Model na Jenụwarị 1, 2021, "oge" "ọbụlagodi ndị na-emepụta ihe nchara ígwè" na-akpaghị aka na ọdụ ụgbọ mmiri Qingdao bụ ebe amụrụ nke ọdụ ụgbọ mmiri shandong, weta Afọ Ọhụrụ ụgbọ mmiri nke mbụ na-arụ ọrụ 299 - m ...
Jiri na nhazi ọkwa nke nnukwu ọrụ shelves
Nke mbụ, maka nnukwu shelf ga-arụ ezigbo ọrụ nke nhazi, iji hụ na edobere ngwaahịa niile n'usoro, nke abụọ, ọ dị mkpa iji hụ na ngwaahịa ọ bụla nwere ebe dị anya n'etiti ibe ha, nke mere na ọ gaghị enwe extrusion n'etiti ngwaahịa, nke mere na ọnwụ nke ngwaahịa ...
Ntuziaka maka nchekwa maka iji rụọ ọrụ
Nnukwu ihe eji eme ihe iji gbochie oke-arọ: ekwesịrị ime ya ka itinye ngwongwo dị n'elu, ala nke ụkpụrụ nke ngwongwo dị arọ. Ekwesiri ibubiga ibu na ojiji nke ihe eji ebu ihe: ibu nke ngwugwu ngwongwo ọ bụla ekwesịghị ịgafe ibu kachasị nke shelf a haziri. Arọ adị anyị ...
Lọ nkwakọba ihe na-eji uru nchekwa nchekwa
1. Thelọ nkwakọba ihe ahụ bụ akụkụ akụkụ atọ, nke nwere ike iji ohere ụlọ nkwakọba ihe mee ihe n'ụzọ zuru oke, melite ọnụego ojiji nke ikike ụlọ nkwakọba ihe ma gbasaa ikike nchekwa. 2. Adaba ịnweta ngwongwo, ikike ịhọrọ ngwongwo na ma pụọ, ntụgharị ntụgharị dị mma. 3, ngwongwo m ...
Garalọ Garage kacha mma - 1
Imirikiti ndị nwere ebe a na-adọba ụgbọala maara nke ọma na ememe kwa afọ nke nhicha mmiri. Nke a bụ ebe ị na-ewere ihe niile anaghị ejikarị eme ụlọ gburugburu bụ nke a tụbara n'ụzọ na-enweghị ihe ọ bụla n'ime ụgbọala ahụ na-enweghị oke nsogbu ma ọ bụ nzukọ wee gafee ha, na-achọpụta ihe ịchọrọ t ...
Obere Nchekwa Obere Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo Shelf maka ulo Ime ụlọ ime ụlọ Ogbe shelf